UD: Halkan ha iska diiwaangaliyeen, dadka safarka ku maqan. - NorSom News
UD: Halkan ha iska diiwaangaliyeen, dadka safarka ku maqan.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Norway(UD), ayaa dhamaan muwaadiniinta Norwiijiga ah ka codsaday inay iska diiwaangaliyaan webka dowlada, si loola socdo xaaladooda, loona caawin karo hadii ay wax kusoo kordhaan.
UD ayaa dadka ka codsaneyso inay mar walba soo diiwaangaliyaan meesha ay joogaan, iyo xiliga ay Norway kusoo noqon doonaan.
Halkan iska diiwaangalin: reiseregistrering.no.
Xigasho/kilde: UD ber alle utenlandsreisende registrere seg
Previous articleEreteriya: Norway ayuu nooga yimid qofkii ugu horeeyay ee Corona-virus laga helay.
Next articleDaawo: Sidan ayaad u codsan kartaa, lacagta dagpengerka, hadii shaqada lagaa fariisiyay.